June 8, 2021 1531
चितवनकी सविता भण्डारीको मृ त्यु प्रकरण उनी`प्रति न्याय माग्दै सामा`जिक सञ्जालमा ह्या स ट्या ग नै चलिरहेको छ, ज स्टिस फर सविता भण्डारी दे ह त्या ग कि ह त्या? सोसल मिडियामा सवि`ताको मृत्युको बहसको विषय बनेको छ। यो घटनाको अन्तर्य केलाउँ`दा महिनौं`देखि भोग्दै आएको मृ त्युको खास कारण देखिन्छन्।
घटना गत वैशाख ४ गतेको हो। साँझपख चि`तवन प्र`हरीलाई खबर पुग्यो– ‘भरतपुर–१९ मा एक महिलाले दे ह त्याग ग रिन्।’ ती महिला थिइन्, सविता भण्डारी धिताल। प्र`हरीसम्म खबर पुर्‍याउने चाहिँ सविताकै पतिको परिवार थियो। प्र`हरीलाई जतिबेला दे ह त्याग खबर पुग्यो, त्यतिबेला परिवारले ती महिला`लाई चित`वन मेडिकल कलेज लगि$सकेको थियो। त्यसपछि सवि`ताको माइती पक्षको दाबी रह्यो–उनलाई सकिदीएका हुन् ।
चित`वन प्रह`रीको अनु`सन्धानले भने सविताले दे ह त्या गनै गरेको निष्क`र्ष निकाल्यो। ‘यस्तो के`समा अनु`सन्धान गर्दा हामी दुइटा कुरा हेर्छौं– कि त मृ तक आफैले यस्तो गरेको हुनु पर्यो कि त अरुले यस्तो गराईएको हुनु पर्छ ’ जिल्ला प्र`हरी कार्यालय चितवनका प्रमुख एसपी ओम अधिकारी भन्छन्, ‘हामी घ`टनास्थ`ल पुगेर अनु`सन्धान गर्दा केही छिमेकीको उप`स्थितिमा मृ त कलाई यस्तो अबस्था बाट निकालेर अस्प`ताल पुर्‍याएको पाइयो।
तर, सविताको मा€इती पक्ष यो निष्कर्ष मान्न तयार भएन। सवि`ताको श्रीमान् र उनको परिवारले दाइजो नदिएको निहुँ`मा निरन्तर गर्दै आइरहेको र त्यही क्रममा यो परिणाम आएको आ रोप लगायो। श्रीमान् योगेन्द्रकुमार धिताल, ससुरा रमेशकुमार धिताल र आमाजु भावना ढकाल मिलेर सविताको यो अवस्था`ममा ल्याएको उनी`हरुको आ रो प थि यो।
सविता`को माइती पक्षले ७५ वर्षीय ससुरा रमेश कुमार धितालले सवितालाई न’रा’म्रो व्य’वहा’र गर्ने गरेको आ’रोप ल गा एका छन्। सविताको बिहे ०७१ सालमा भएको थियो। सविताले बहिनी सजनीलाई ससुराले गर्ने त्यो व्यवहारको बारे सुनाएको फेस`बुक च्याट पनि सार्वजनिक भएको छ।
‘त्यसपछि मैले दिदीलाई यसरी बोलेको भरमा कसै`लाई पत्याउँदैन, बरु एउटा भिडियो बनाउने प्रयास गर न भनेर सुझाएकी थिएँ,’ सजनीले एक युट्युब च्यानल`सँग भनेकी छिन्, ‘त्यसपछि सविताले भिडियो बनाइन् र मलाई पठाएकी हुन्।’
यही भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भा`इरल भइरहेको छ। जहाँ ससुरा सवि`ताको काखमै सुत्न खोज्छन्। ‘काखमै सुत्नुपर्ने त?’ त्यसपछि भिडियोमा सविताले अ’सह’ज भाव प्रकट गरेकी छिन्।
Prevआज नेपालमा सुनको मूल्य घट्यो कि बढ्यो ? हेर्नु`होस् मूल्य
Nextभर्खरै बिहे गरेर आएकी श्रीमतीले आमालाई नेकलेस चोर लगाइन्, सहन नसकेर आमा धुरुधुरु रोइन्
तिहार मनाउन भारतबाट नेपाल फर्कने क्रममा दुर्घ-टना हुँदा ३ नेपालीको मृ’त्यु
पुनर्मिलन पछि लाहुरे राहुल र स्मिता पहिलोपल्ट मिडियामा, स्मितालाई यतिसम्म भने (हेर्नु,स् भिडियो)
तेह्रथुमका ६ जनाको आरडीटी रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ देखियो